Kpido: vr | Martech Zone
Kemgbe mmalite nke ahịa nke oge a, ụdị ghọtara na ịmepụta njikọ na ndị ọrụ njedebe bụ isi maka usoro ịzụ ahịa na-aga nke ọma - imepụta ihe na-akpali mmụọ ma ọ bụ na-enye ahụmịhe na-enwekarị mmetụta na-adịgide adịgide. Site na ndị na-ere ahịa na-echigharịkwu na ụzọ dijitalụ na nke mkpanaka, ikike ijikọ ndị ọrụ njedebe n'ụzọ imikpuola ala. Agbanyeghị, nkwa nke mebere eziokwu (VR) dị ka ahụmahụ miri emi dị
Tọzdee, Febụwarị 2, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Amaara m na ọ bụ ọnwa Febụwarị mana anyị adịchabeghị njikere ịhapụ ihe data ndị eburu n'uche maka afọ a na-abịa. Nnyocha a banyere ọnọdụ ndị ahịa si na GlobalWebIndex na-agbasi ike ma n'usoro na mgbanwe nke omume ndị ahịa. The Trends 17 Report ọbụna dọrọ aka ná ntị na afọ a a na-akpọ ndakpọ ọnọdụ nwere ike gbasaa site na isi mgbasa ozi mmekọrịta na ngwa ngwa ozi ka ha na-agbakwunye ọrụ - na ndị ọrụ kwụsị itinye aka. Laa azụ na 2012, nkezi
Thursday, May 19, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Mgbe ndị mmadụ jụrụ m maka amụma, m na-agwakarị ha onye ọzọ. Adịghị m ọtụtụ onye futurist, mana enwere m ndekọ egwu mara mma na ịhụ etu teknụzụ teknụzụ ga-esi emetụta omume ịzụ ahịa. Otu teknụzụ m jiri nwayọ jụụ abụgo eziokwu na mebere eziokwu. Ọ dị mma, mana ekwenyere m na anyị ka ga-anọ afọ ole na ole site na iji ya eme ihe. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ahịa na-ere ahịa, aga m aga